साथीहरूसँग घडी 62
सामान्यतया "आत्मा" शब्दको अर्थ के हो र आत्मा शब्द कसरी प्रयोग गर्नुपर्दछ?
यो शब्द धेरै तरीकाले प्रयोग भएको छ। जसले यसलाई प्रयोग गर्छन् उनीहरूको नियमावलीको नियतको अस्पष्ट धारणा हुन्छ। तिनीहरू सबै दिमागमा छन् कि यो भौतिक कुराको होइन। यो कुनै स्थूल भौतिक कुराको होइन। यसबाहेक, यो शब्द अन्धाधुन्ध प्रयोग गरिन्छ, प्राकृतिकको रूपमा जहाँ पदार्थको विकासमा यति धेरै डिग्री हुन्छन्, र यी डिग्रीहरूलाई निर्दिष्ट गर्न कुनै स्वीकृत प्रणाली हुँदैन। मिश्रीहरूले सातजनाको कुरा गरे; एक तीन गुणा आत्मा को प्लेटो; इसाईहरूले आत्मा र आत्मिक शरीर भन्दा फरक कुरा आत्माको कुरा गर्छन्। हिन्दू दर्शन विभिन्न प्रकारका आत्माको कुरा गर्दछ, तर यो एक प्रणाली को बयान पिन गर्न गाह्रो छ। केही थेसोफिकल लेखकहरूले तीन आत्माहरू बीच अन्तर छुट्याउँछन् - दिव्य आत्मा (बुद्धी), मानव आत्मा (मानस), र काम, पशु आत्मा। थेसोफिकल लेखकहरू शब्द आत्मा प्रयोग गर्नु पर्ने कुरामा सहमत छैनन्। यसैले त्यहाँ कुनै स्पष्टता, कुनै संक्षिप्तता छैन, आत्मा भन्ने शब्द थियोसफिकल साहित्यमा अदृश्य प्रकृतिका विभिन्न पक्षहरूलाई समेट्छ। त्यसकारण आत्मा शब्दले प्राय: के भन्न खोजेको हो भन्न असम्भव छ।
"मन र आत्माले माया गर्दछ," "जस्तो सामान्य बोली वाक्यांशहरूमा" म यसको लागि मेरो प्राण दिनेछु "," "मेरो आत्मा उसलाई दिनुहोस्," "आत्मा र तर्कको भोज," "आत्माले आँखा," "जनावरहरूको आत्मा, "" मरेकाहरूको आत्मा ", अलमल्लमा पार्दछ।
यस्तो देखिन्छ कि एउटा साझा पक्ष भनेको आत्माको अर्थ अदृश्य र अमूर्त कुरा हो, र त्यसैले यो पार्थिव कुराको होइन, र प्रत्येक लेखकले अज्ञातको त्यस्तो भाग वा अ cover्गलाई कभर गर्न शव्द प्रयोग गर्दछ जब ऊ खुशी हुन्छ।
तल आत्मा शब्द कसरी प्रयोग गर्ने भनेर केही विचारहरू दिइएका छन्।
पदार्थ बाह्य श्वास को प्रत्येक अवधि मा प्रकट हुन्छ, पदार्थ बाहिर सास बाहिर छ। जब पदार्थ आफै बाहिर सास बाहिर, यो संस्थाको रूपमा बाहिर सास फेर्छ; त्यो हो, स्वतन्त्र संस्थाहरू, व्यक्तिगत एकाइहरू। प्रत्येक व्यक्तिगत एकाइको क्षमता छ, यद्यपि तत्काल सम्भावना होइन, सबैभन्दा ठूलो हुन सक्ने बन्न योग्यको छ। प्रत्येक व्यक्तिगत एकाइको सास फेर्दा दोहोरो पक्ष हुन्छ, अर्थात्, एक पक्ष बदल्दै, अर्को अपरिवर्तित। परिवर्तित पक्ष प्रकट भाग हो, अपरिवर्तनशील अप्रमाणित वा पदार्थ अंश हो। प्रकट गरिएको अंश आत्मा र आत्मा, शक्ति र पदार्थ हो।
आत्मा र आत्माको यो द्वन्द्व परिवर्तनको सम्पूर्ण सेटको माध्यमबाट फेला पर्दछ जुन एक पछि अर्कोमा सफल हुन्छन्।
एक व्यक्ति एकाई अन्य व्यक्तिगत इकाइहरूको साथ संयोजनमा प्रवेश गर्दछ, यद्यपि यसको व्यक्तित्व कहिल्यै हराउँदैन, यद्यपि यसको सुरुमा कुनै पहिचान छैन।
अध्यात्मको पहिलो चरणबाट संकुचनको पछिल्लो चरणमा अर्थात् भौतिक वस्तुमा परिणत हुँदै जाँदा आत्माले बिस्तारै आफ्नो प्रभुत्व गुमाउँछ, र पदार्थ यस्तै डिग्रीमा आरोहण बढ्छ। शब्द शक्ति आत्माको ठाउँमा प्रयोग भएको छ, जससँग यो मिल्दछ, जबकि पदार्थ आत्माको ठाउँमा प्रयोग हुन्छ।
पद पदार्थ प्रयोग गर्नेले सोच्नु हुँदैन कि उसले आफुलाई शब्दले छोपेको छ र उसलाई के थाहा छ त्यो के हो भन्ने हो। यथार्थमा भन्ने हो भने, हुनसक्छ उहाँलाई आत्मा के हो भनेर जति थोरै थाहा छ उसलाई। उसलाई केही खास गुणहरू र पदार्थका गुणहरूको इन्द्रियको उपस्थिति थाहा छ, तर के कुरा के हो भने, यी कुराहरूबाट अलग रहँदा उसलाई थाहा छैन, कमसेकम जबसम्म उसको संवेदनाशील धारणा त्यस माध्यमबाट जानकारी उहाँसम्म पुग्छ।
आत्मा र आत्मा र दिमाग समानार्थी शब्दको रूपमा एक अर्काको प्रयोग हुनुहुन्न। संसारमा त्यहाँ सातवटा अर्डर वा चारवटा प्लेनमा आत्माहरूको वर्गहरू छन्। आत्माको सात आदेशहरू दुई प्रकारका हुन्छन्: अवरोहीत आत्माहरू र आरोहीत आत्माहरू, विक्रांतिकारी र विकासवादी। अवतरित आत्माहरू आत्माद्वारा कार्य गर्न प्रेरित, उत्साहित, आग्रह गरिएको छ। आरोहीत आत्माहरू हुन्, वा यदि ती हुदैनन् भने, उनीहरू दिमागले जगाउँछन् र डो guided्याउँछन्। सातवटा अर्डर मध्ये चार प्रकृति आत्माहरू छन्, प्रत्येक अर्डरमा यससँग सम्बन्धित विश्वमा धेरै डिग्रीहरू छन्। आत्माले अमर्त आध्यात्मिकबाट विभिन्न प्रकारका जीवन र रूपहरू र प्रकृतिका चरणहरू मार्फत क the्क्रीट भौतिकमा आक्रान्त मार्गमा एक बढ्दो आत्मालाई उत्प्रेरित गर्छ, जबसम्म यो विकसित हुँदैन वा मानव शारीरिक रूपमा नआइन्छ। आत्मा वा प्रकृतिले सम्मिलित रूपमा आत्मालाई अगाडि थिचेको छ, तर यो दिमागले मानव नश्वरदेखि ईश्वरीय अमरसम्मका तीनवटा अर्डरको बिभिन्न डिग्रीहरू मार्फत क्रमविकासको पथमा चढ्ने आत्माको रूपमा उठ्नुपर्दछ। । आत्मा आत्माको अभिव्यक्ति, सार र अस्तित्व, र जीवन र दिमागको हो।
सात अर्डरहरू बीच भिन्नता राख्न हामी अवतरण गर्ने आत्माहरूलाई सास-आत्मा, जीवन-आत्मा, फार्म-आत्माहरू, यौन-आत्माहरू; र आरोही क्रम पशु-प्राण, मानव आत्मा, र अमर प्राणहरूको। चौथो, वा सेक्सको अर्डरको सम्बन्धमा, यो बुझ्नु पर्छ कि आत्मा यौन होइन। यौन शारीरिक वस्तुको एक विशेषता हो, जसमा दिमागले विकासवादी मार्गमा उनीहरू उठाउन अघि सबै प्राणहरू स्वभावको हुनुपर्दछ। प्रत्येक अर्डर आत्मामा एक नयाँ भावना विकास गर्दछ।
प्रकृति आत्माको चार अर्डर दिमागको सहायता बिना अमर हुन सक्दैन। तिनीहरू सासको रूपमा अवस्थित हुन्छन् वा लामो अवधिका लागि जीवनहरू र फारमहरू, र त्यसपछि तिनीहरू शारीरिक शरीरमा लामो समयका लागि अवस्थित हुन्छन्। केही समय पछि तिनीहरू शरीरमा आत्माको रूपमा अस्तित्वमा रहन्छन् र मृत्युको क्रममा परिवर्तनको अवधिमा जानुपर्दछ। त्यसपछि परिवर्तनबाट त्यहाँ एक नयाँ अस्तित्व आउँछ, एक नयाँ अस्तित्व, जसमा शिक्षा वा त्यस क्रममा अनुभव जारी रहन्छ।
जब दिमागले यसलाई जगाउन आत्मासँग जोड्दछ, दिमाग सुरुमा सफल हुँदैन। पशु आत्मा दिमागको लागि धेरै शक्तिशाली छ र उठाउन इन्कार गर्दछ। त्यसैले यो मर्छ; यसले आफ्नो रूप गुमाउँछ; तर यसको अत्यावश्यक अस्तित्वबाट जुन दिमाग हराउन सक्दैन उसले अर्को रूपलाई बोलाउँदछ। दिमागले जनावरबाट आत्मालाई मानव अवस्थामा उचाल्न सफल हुन्छ। त्यहाँ आत्माले छनौट गर्नुपर्दछ कि यो जनावरमा फर्कन चाहे अमरमा जान चाहन्छ। यो यसको अमरत्व प्राप्त गर्दछ जब यसलाई यसको पहिचान थाहा छ अलग र स्वतन्त्र रूपमा दिमागले जसले यसलाई मद्दत पुर्‍यायो। त्यसोभए जुन आत्मा थियो त्यो एक दिमाग हुन्छ, र जसले दिमागलाई आत्मा ब्यूँताएको दिमागले चार प्रकट विश्वहरू पार नगरी देखा पर्न सक्छ, र सबैको ईश्वरीय आत्मासँग एक हुन्छ। त्यो आत्मालाई के रेखांकित गरियो? सम्पादकीय "आत्मा," फेब्रुअरी, 1906, भोल्यूम। दोस्रो, वचन।
त्यहाँ एक आत्मा वा आत्मा पदार्थ र प्रकृति को हरेक कण, दृश्य र अदृश्य संग जोडिएको छ; सबै शरीरको साथ, शरीर खनिज, तरकारी, पशु वा आकाशीय प्राणी, वा एक राजनीतिक, औद्योगिक वा शैक्षिक संगठन हो। जुन परिवर्तन हुन्छ त्यो शरीर हो; जुन परिवर्तन हुँदैन, जबकि यसले सँगै जोडिएको परिवर्तनशील शरीरलाई एकसाथ समात्छ, आत्मा हो।
के जान्नको लागि मान्छे को संख्या र प्राण को प्रकार को बारे मा यति धेरै छैन; ऊ जान्न चाहन्छ कि मानव आत्मा के हो। मानव आत्मा दिमाग होईन। दिमाग अमर छ। मानव आत्मा अमर छैन, यद्यपि यो अमर हुन सक्छ। दिमागको एक अंश मानव आत्माको साथ जोड्दछ वा मानव शरीरमा ओर्लन्छ; र यसलाई अवतार वा पुनर्जन्म भनिन्छ, जबकि पद सही छैन। यदि मानव आत्मा दिमागमा धेरै प्रतिरोधको प्रस्ताव गर्दैन, र यदि दिमाग यसको अवतारको उद्देश्यमा सफल हुन्छ भने यसले मानव आत्मालाई एक नश्वर आत्माको अवस्थाबाट अमरको अवस्थासम्म पु .्याउँछ। त्यसोभए जुन मानव जीवन थियो, त्यो अमर हुन्छ — एउटा दिमाग। इसाई धर्म र विशेष गरी विकरास प्रायश्चितको सिद्धान्त यस तथ्यमा आधारित छ।
एक विशेष र सीमित अर्थमा मानव आत्मा ईथरियल र अमूर्त रूप हो, शारीरिक शरीरको र्याथ वा भूत, जसले लगातार परिवर्तन हुने शारीरिक शरीरको आकार र सुविधाहरू एकसाथ समात्छ र ती अक्षुण्णलाई सुरक्षित गर्दछ। तर मानव आत्मा यो भन्दा बढी छ; यो व्यक्तित्व हो। मानव आत्मा वा व्यक्तित्व एक अद्भुत प्राणी हो, विशाल संगठन हो, जहाँ निश्चित उद्देश्यका लागि संयुक्त हुन्छन्, अवतरण गर्ने आत्माको सबै अर्डरका प्रतिनिधिहरू। व्यक्तित्व वा मानव आत्मा सँगै समात्छ र बाह्य र भित्री इन्द्रियहरू र तिनीहरूको अंगहरू समावेश गर्दछ, र नियमन गर्दछ र उनीहरूको शारीरिक र मानसिक कार्यहरू मिलाप गर्दछ, र यसको अस्तित्वको अवधिभरि अनुभव र स्मृतिलाई सुरक्षित गर्दछ। तर यदि नश्वर मानव आत्मा आफ्नो नश्वर मानव अवस्थाबाट उठेको छैन भने - यदि यो एक दिमागमा बनेको छैन भने - त्यो आत्मा वा व्यक्तित्व मर्दछ। एक दिमाग हुनको लागि एक आत्मा को उठाउन मृत्यु अघि गर्नु पर्छ। यो दिमाग बन्नको मतलब भनेको एक व्यक्ति स्वतन्त्र रूपमा र शरीरको बाहिरी र भित्री इन्द्रियबाट स्वतन्त्र रूपमा पहिचानको सचेत छ। व्यक्तित्व वा मानव आत्माको मृत्युको साथ प्रतिनिधि आत्माहरूले यसलाई रचना गर्छन। तिनीहरू मानौं आत्माको संयोजनमा फेरि प्रवेश गर्न, उतरिरहेको आत्माको उनीहरूको सम्बन्धित आदेशहरूमा फर्कन्छन्। जब मानव आत्मा मर्दछ यो आवश्यक छैन र सामान्यतया हराउँदैन। त्यहाँ यो छ जुन मर्दैन जब यसको भौतिक शरीर र यसको प्रेत रूप नष्ट हुन्छ। मानव आत्मा जो मर्दैन त्यो अदृश्य अमूर्त कीटाणु हो, व्यक्तित्व जीवाणु हो, जहाँबाट नयाँ व्यक्तित्व वा मानव आत्मा भनिन्छ र वरपर नयाँ शरीर बनेको हुन्छ। व्यक्तित्व वा आत्माको कीटाणु बाहिर भन्ने कुरा दिमाग हो, जब त्यो दिमाग तयार हुन्छ वा अवतार लिन तयार हुन्छ। मानव आत्माको व्यक्तित्वको पुनर्निर्माण आधार हो जुन आधारमा पुनरुत्थान सिद्धान्तको स्थापना भएको छ।
आत्माका सबै प्रकारका बारे जान्नको लागि विज्ञानको विश्लेषणात्मक र विस्तृत ज्ञान आवश्यक पर्दछ, ती मध्ये रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान र शरीर विज्ञान। त्यसोभए ट्विस्टि abandहरू त्याग्न आवश्यक छ जुन हामी मेटाफिजिक्स भन्न चाहन्छौं। त्यो शब्द गणित जत्तिकै सही र भरपर्दो विचार प्रणालीको लागि खडा हुनुपर्छ। यस्तो प्रणाली र विज्ञान को तथ्यहरु संग सुसज्जित, हामी तब एक साँचो मनोविज्ञान, एक आत्मा विज्ञान हुनेछ। जब मानिसले यो चाहन्छ उसले त्यो पाउनेछ।